Showing 141-160 of 980 items.
अब राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्य र कानून पढाइ हुने
सिरहा,फाल्गुन १० गते । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रमा कानून र जनस्वास्थ्य विषयको स्नातक तहको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ । नयाँ शैक्षिक योजनाअन्तर्गत ती दुवै विषयको अध्ययन अध्यापन गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएक�
सिरहा,फाल्गुन १० गते । धनुषाको औरही गाउँपालिका वडा नम्बर ५ हौरसाहा टोलमा सोनाई भुइया थान किर्तन भवन निर्माण हुने भएको छ । धनुषा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित साँसद उमाशंकर अरगरियाले शुक्रवार एक कार्यक्रमबीच भवन निर्माणको शिल�
सिरहा,फाल्गुन १० गते । प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा सोमवारदेखि बेटी सम्मेलन हुने भएको छ । &lsquo;आसनमा महिला, भाषणमा महिला र शासनमा महिला&rsquo; मुल नाराका साथ जनकपुरमा दोस्रो बेटी सम्मेलन हुन लागेको हो । मुलधार महिला सेवा केन्�
जनकनन्दनीमा ट्राफिक जनचेतना कार्यक्रम
सिरहा,फाल्गुन १० गते । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय धनुषाद्वारा जनक नन्दनी गाउँपालिका ५ को वडा कार्यालयमा बिहीवार ट्राफिक जनचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। समुदाय&ndash;प्रहरी साझेदारी अभियान अन्तर्गत गरिएको कार्यक्रममा सडक सभ�
दिलिपलाई शहीद घोषणा गराउन आन्दोलन घोषणा
सिरहा,फाल्गुन १० गते । खोला उत्खनन्को बिरोध गरेकै कारण टिपरले किचेर मारिएका धनुषाको मिथिला नगरपालिका ५ श्रीनगर निवासी दिलिप महतोलाई शहीद घोषणा गराउन आन्दोलन घोषणा गरिएको छ। पिछडा वर्ग समाज (ओबीसी) ले दिलिपलाई शहीद घोषणा गराउन
सिरहा,फाल्गुन १० गते । सिरहाको औरही गाउँपालिका ५ मा हुन लागेको एउटा बालविवाह प्रहरीले रोकेको छ । स्थानीय रामसेवक दासले आफ्नो १४ वर्षिया छोरी पुजा दासको गर्न लागेको विवाह प्रहरीले रोकेको हो । बालिका पूजासँग धनुषाको शहिदनगर नगर
मुश्लिम सभा गरिएको स्थल खुल्ला दिशाले दुर्गन्धित
सिरहा,फाल्गुन १० गते ।&nbsp; हालै मुश्लिम समुदायले आयोजना गरेको धार्मिक सभास्थल दुर्गन्धित बनेको छ । सभामा आएका सहभागीले जताततै दिशा पिसाव गरेपछि यो क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको स्थानीयहरुले बताएका छन् । मुश्लिम समुदायको धार्मिक स�
भारतीयले नागरिकता लिन खोजेको चर्चा प्रमाण भए दुई जना पिताको नाम लेखेर नागरिकता दिइने
सिरहा,फाल्गुन १० गते । भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र लिने गरेका उदाहरण कुनै नौलो होइन् । किर्ते गरी नागरिकता लिएको खुलेपछि कतिपय भारतीय जेल पनि परेका छन् । जनकपुरधाममा अहिले खुला रुपमा भारतीयले नागरिकता लिन खोजेको
मिथिलाको डोला उठाउन प्रचण्ड आउँदै
सिरहा,फाल्गुन १० गते । मिथिला धाम मध्यमा परिक्रमाको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल &lsquo;प्रचण्ड&rsquo; धनुषा आउने भएका छन् । मिथिला धाम मध्यमा परिक्रमा र मिथिला विहारी विहार
जनकपुरमा राजेन्द्र महतोले गरे धर्मशाला शिलान्यास, दलित वस्तीमा खुशीयाली
सिरहा,फाल्गुन १० गते । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले जनकपुरमा धर्मशालाको शिलन्यास गरेका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका&ndash;२० देवपुरा रुपैठास्थित धनुषा क्षेत्रनम्बर ३ का संघीय सांसद समेत रहेका महतोले स्थानीय पुर�
सप्तरीका युवा विदेशबाट फर्केर भैंसी पालन गरी घरमै बसेर लाखौ आम्दानी गर्दै
सिरहा,फाल्गुन १० गते । विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरु भैसी पालन गरेर वार्षिक लाखौंको आम्दानी घरमै बसेर गर्दै आएका छन् ।सप्तरीको साबिक राजविराज नगरपालिका वडा नं. ३ हाल राजविराज नगरपालिका वडा न. ९ मलेठका संतोष सिंह र मो. अबनारुलले त
महागढीमाई मेयरको निर्देशनमा कुटपिट गर्ने ८ जना विरुद्ध जाहेरी
सिरहा,फाल्गुन १० गते । भिडियो खिचेको निहुमा मेयरको निर्देशनमा कुटपिट र अपहरणको प्रयास गर्ने ८ जना विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी परेको छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिका २ बरियारपुर महेन्द्र भन्ने हरेन्द्र महतोले जाहेरी द�
धनुषामा शिव मन्दिर उदघाटन गर्दै नेता निधिले भने – लुटनेलाई भगवान शिवले संहार गरुन्
सिरहा,फाल्गुन १० गते । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको रहस्योद्घाटन हुन थालेको बताएका छन्। संघीयता र संविधान मास्न उद्यत अहिलेको सरकार मुलुकलाई समेत लुट्न थालेको उनले बताए। धनुषाको न